Tongasoa eto amin'ny Forum!
Salama daholo 3 taona 3 andro lasa izay #724
Vaovao aho eto ary hitako ity tranokala omaly ity.
Mandritra ny fotoana lava be dia mpampiasa miavonavona ny mpitsangatsangana amin'ny pilotra 2004 aho, ary mbola betsaka ny mahita izany.
Nahita an'ity tranonkala ity aho rehefa avy nijery ny fiaramanidina maimaim-poana.
Mahatalanjona izay hitako eto.
Noho izany dia tiako ny misaotra betsaka anao noho ity vokatra avo lenta ity.
Salama daholo 3 taona 3 andro lasa izay #726
Misaotra betsaka noho ireo teny tsara rehetra ireo. Ny lalako ho tonga eto dia toa mitovy amin'ny anao ihany. Mandeha aho FSX Fotoana elaela izao dia efa ao amin'ny FS2004 aho, izay tsy ratsy mihitsy.
Hanao izay rehetra azonay atao izahay mba hahatonga ny fijanonanareo eto araka izay azo atao.
Misaotra betsaka anao ary mankasitraka indray.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: leocha1
Salama daholo 2 taona 11 volana lasa izay #741
Tiako ny milaza ny misaotra ny download malalaka rehetra omenao, efa nampiasa ny tranokalanao nandritra ny volana maromaro aho ary tokony nisaotra anao talohan'izay fa ny zavatra hafa dia ny hoe ao amin'ny ebay amin'ny ankapobeny mijery fiaramanidina sns sns Amin'ny olona mivarotra (Freeware Aircraft) ka dia nirakitra azy aho ary nanontany raha toa ka maimaim-poana izy ireo satria nanana ny planeta natolony ihany izy ary nanontany tena raha toa izy ireo na dia tsy milefa na mandoa vola aza izy namaly ary nilaza fa izy ireo dia fanafahana maimaim-poana izay nolazainy fa bundle of freeware ao anaty kitapo. Amin'izao fotoana izao dia toa tsy mety amiko izany, mba hanesorana ireo olona rehetra izay nanamboatra sy namoaka ireo fiaramanidina.
Angamba tsy misy raharaham-barotra ataoko izany fa mihevitra aho fa diso tanteraka izy, azoko antoka fa tsy ara-dalàna raha tsy fantatro fa tsy te-hampitandrina olona fotsiny aho fa ny fiaramanidina rehetra ao anaty fiaramanidina dia azo avy amin'ny Rikoo na ny sasany Ny tranonkala fidirana hafa.